DHAGEYSO: 30 Qof Oo Loo xiray Dhaca Muqdisho & Taliye Xijaar Oo… – XAMAR POST
DHAGEYSO: 30 Qof Oo Loo xiray Dhaca Muqdisho & Taliye Xijaar Oo…
By Mohamed Abdi Last updated Mar 24, 2021
Taliyaha Ciidanka Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya Jen. Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka hadlay howlgal Ciidanka Booliska ka sameeyeen Magaalada Muqdisho oo lagu soo qabtay rag farabadan oo burcad.
Taliye Xijaar oo Maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in howlgal ay sameeyeen Ciidamada amniga lagu qabtay 30-ruux oo burcad ah, isla markaana xiligii la qabanayay ay dad shacab ah ka dhacayeen dad shacab ah.
Waxaa uu sheegay Taliyaha Ciidanka Booliska in maalmaha soo socda ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan ragga burcada ah ee la qabtay, isla markaana laga qaadi tallaabo sharci ah, maadaama ay wadeen falal amni darro.
Sidoo kale Taliye Xijaar ayaa waxaa uu laamaha amniga iyo maamulada Degmooyinka Gobolka Banaadir ugu baaqay inay soo qabtaan burcada dhaca u geysata dad shacab ah xiliyada habeenkii ah, wuxuuna caddeeyay in marnaba aan la aqbali doonin falalkaas.
Dhinaca Taliyaha Ciidanka Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya Jen. Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay inay jiraan rag kale oo watay qaraxyo oo Ciidanka amniga ay qabteen, isla markaana ay soo bandhigi doonaan.
Madaxweyne Kuxigeenka Galmudug Oo Kormeer kedis ku Tegay…
Wasiirka kalluumeysiga Soomaliya oo digniin u diray Maraakiibta sida sharcidarada ah uga kalluumeysanaya badeena.